जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन , कसले कति ? – Beema News
जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन , कसले कति ?
प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०७५, मंगलवार १५:५७
मंसिर ४, विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गत वर्ष सञ्चालनमा आएका नौं वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। यसमा सबैभन्दा धेरै २०७४ असोज ६ गतेदेखि व्यवसायिक कारोबार सुरु गरेको युनियन लाइफको ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ योगदान छ ।
यस्तै सबैभन्दा कम गत मंसिर २८ गते देखि व्यवसायिक कारोबार सुरुवात गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । प्रभु लाइफले ६ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
खुद बीमा शुल्क आर्जनको आधारमा युनियनपछि रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ। रिलायवलले यस अवधिमा २२ करोड २१ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । यस्तै सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, ज्योति लाइफ र आइएमई लाइफको खुद बीमा शुल्क १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।
यसै गरी रिलायवल लाइफले ९ करोड ६५ लाख, सानिमा लाइफले ६ करोड ५८ लाख र प्रभु लाइफले ६ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो ।